I-Snapdragon 665 ikhanya kwiXiaomi Mi CC9e kwiGeekbench | I-Androidsis
I-Snapdragon 665 ibonisa kwiXiaomi Mi CC9e kwiGeekbench
Simalunga nosuku olunye nje ukuba singene kwintetho esemthethweni ye Xiaomi Mi CC9, isixhobo esiza kuza nokwahluka okufutshane, okubizwa ngokuba I-Mi CC9e. Sithetha ngale yokugqibela ngeli xesha kuba iGeekbench, iqonga lovavanyo elithandwayo, liyibhalisile kwindawo yayo yedatha yenye yeeprosesa ezisandula ukwenzeka ezivenkileni.
Ibe njalo Snapdragon 665 leyo ibonakele isonyusa le mi CC9e sele ikhankanyiwe. Eli qonga leselula lasungulwa kuphela ngo-Epreli walo nyaka, kodwa alikaveli nakweyiphi na i-smartphone okwangoku. Kodwa, ngenxa yoluhlu esilubonisayo apha ngezantsi lubonisa, iya kuba yenza amatyala ayo kwesi sigxina.
Ngelixa iGeekbench ingayikhankanyi i-SD665 ngolu hlobo, isiseko sokuhamba kwe-SoC isixhobo esiye savela kuso, esiyi-1.80 GHz, yalatha koku. I-Snapdragon 660 ine-frequency ephezulu ye-1.84 GHz, ke ayisiyiyo le processor yokuxhobisa. I-Snapdragon 636 ayisiyiyo eneenkcukacha nokuba, kuba amanqaku afunyenwe yiMi CC9e awavumelani nalawo anokuthi afezekiswe leli qonga leselula. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-SD665 ihlala phakathi kwe-SD660 kunye ne-SD636; ayinamandla ngaphezu kweyokuqala kwaye ingaphezulu kweyesibini.
IXiaomi Mi CC9e ene-Snapdragon 665 kwiGeekbench
Ke ngoko, ngaphandle kwento yokuba akukho siqinisekiso sisemthethweni sivela kwinkampani okanye kwelinye iziko, ngoku kulindeleke ukuba i-smartphone ifike kwintengiso ngale chipset hayi nge Snapdragon 710 Oko bekucingela okufanayo.
Ezinye iinkcukacha ezidweliswe nguGeekbench zibonisa ukuba i-smartphone isebenza Android Pie kwaye ine-RAM eyi-6 GB. Amanqaku akhe kuvavanyo olusisiseko olunye, njengoko kunokubonwa kwitafile, li-1,502, ngelixa kuvavanyo lwe-multi-core luyi-5,373, amanani aqhelekileyo phakathi kuluhlu yenziwe kwaye ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 665 ibonisa kwiXiaomi Mi CC9e kwiGeekbench
ILenovo Z6 sele inomhla wokumiselwa ngokusesikweni
Iimbangi zamasela ngabadlali abaninzi abaqhelekileyo abanesingqisho esininzi kwaye apho kuya kufuneka ubheje imali yakho